We Fight We Win. -- " More than Media ": ဦးသိန်းစိန် မိန့် ခွန်း
ဦးသိန်းစိန် မိန့် ခွန်း
ဦးသိန်းစိန် မိန့် ခွန်း လာနေပါတယ်။ MRTV4 က နေ လွှင့်နေပါတယ်။
သူ အစိုးရ အဖွဲ့ ဆောင် ရွက်ချက်တွေကို ရှင်းလင်းနေတယ်။
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဘယ်လိုကြိုးပန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောနေတယ်။ All Inclusive ဖြစ်ဖုို့အတွက်ကြိုးပန်းနေတယ်
ိဆိုတယ်။ ဒီလိုကြိုးပန်းမှုကြောင့် နိင်ငံရေးအဖွဲ့ စည်းတွေက ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပါဝင်ဖို့ 
အားထုတ်လာပြီလို့ ဆိုတယ်။ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသားခွင့်ကိုလဲ အများဆုံးပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။ နှစ်ကြိမ် တိုင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတယ်။
နိင်ငံခြားရောက်မြန်မာ တွေကို လဲ ကြိုဆိုခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ ကလဲပူးပေါင်း ပါဝင်လာတယ်
လို့ ဆိုတယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက်က အခွင့်အရေးတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ပါဝင်နိင်
ဖို့မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်မယ်လို့ ဆိုတယ်။ တဖက်နဲ့တဖက် အထင်အလွဲတာတွေကို
သူအစိုးရလက်ထက်မှာ အဆုံးသတ်မယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဗမာ ဆိုတာလဲ တိုင်းရင်းသားထဲက
တိုင်းရင်းသား တမျိုးသာဖြစ်တယ်လုို့ ဆိုတယ်။ လက်နက်ကိုင်တိုက်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသား
လူငယ်တဦးနဲ့သူတွေ တယ်။ ဒီလူငယ်က ကျနော်တို့ လဲ Lap Top တွေ ကို ကိုင်ချင်ပါတယ်လုို့ 
သူကို ပြောခဲ့တဲ့အတွက် သူသိပ်ခံစားခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုတယ်။
ကချင်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကတော့ စစ်သားတွေကို မိမိကိုယ်ပဲခုခံ ပါလို့ညွန်ကြားထားတယ်လို့ ဆိုတယ်။ တဖက်နဲ့တဖက် လက်ညိုးထိုး နေလို့ မပြီး ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုရပ်စဲ ဖို့ လိုပါတယ်။ အပြစ်ခတ်ရပ်စဲဖို့ က
ကချင်နဲ့အစိုးရရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အဆင့် ၃ ဆင့် လုပ်ထားတယ်။
ပထမ အဆင့်- ပြည်နယ်အဆင့်။ ဒီအဆင့်မှာကိုယ်နယ်ဒေသ အတွင်းမှာကိုယ်နေ။ လက်နက်ကိုင်ထား။ တခြားပြည်နယ်သွားရင် လက်နက်မကိုင်ရ။ နိင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုတွေကို
ဒုတိယအဆင့် - ပြည်ထောင်စုအဆင့်။ ဒီအဆင့်မှာ ခွဲမထွက်ရဘူး။ ဒို့ တာဝန်အရေးသုံးပါးကိုလက်ခံ။ မူးယစ်ဆေးဝါးမထုတ်ရ။ တခုတည်းသော တပ်မတော်မူကိုလက်ခံ။ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဆွေးနွေးကြမယ်။ ဖွဲ့ စည်းပုံကို အများ သဘော နဲ့ ပြင်။
တတိယဆင့် - နိင်ငံတော်၊ အတိုက်ခံ၊ တိုင်းရင်းသားတွေပါတဲ့လွတ်တော်မှာ လက်မှတ်ထိုးပြီး
သေနပ်ကို်င်ပြီးရပ်တည်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေ လက်တော့ကွန်ပြူတာကိုင်ပြီး
ထည်ထည်ဝါ၀ါရပ်တည်နိင်ဖုို့ အတွက် နိင်ငံတော်နဲ့ ပူးပေါင်း ဖို့ လိုကြောင်း။
မြန်မာ စီးပွားရေးဦးမော့ဖို့ လိုကြောင်း။ သူအစိုးရလက်ထက်မှာ ဈေးကွက်စီးပွားရေးပီပီပြင်ပြင်
ဖြစ်ဖို့မိုက်ခရိုစီးပွားရေးဖြစ်ဖို့အတွက် ကြိုးပန်းနေကြောင်း။ စီးပွားရေးပိတ်စို့ မှု၊ နိင်ငံတကာစီးပွားေး ပျက်နေတဲ့ဒီကာလမှာ အစွမ်းကုန်ကြိုးပန်းနေကြောင်း။ အခွန် တွေကိုလျော့ချပေးခဲ့ကြောင်း။
နိင်ငံခြားငွေလဲမှု နှုန်းထားကိုလဲ ပြင်ပေးခဲ့ကြောင်း ။ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လိုင်စင်များကိုလဲ
ချမှတ်ပေးနေကြောင်း။ ဆန်စပါးလွတ်လပ်စွာ သယ်ယူခွင့်ပေးခဲ့ကြောင်း ။
မိုဘိုင်းလ်ဖုံး ကိစ မှာလဲ တည်ဆောက်ရေး လုပ်နေရပါကြောင်း ပြီးသွာင်းရင် အဆင်ပြေအောင် ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်း။ ကား ဈေးနှုန်း ကိုလဲ ကျအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုကြောင်း။ အများ ပိုင်ကုမဏီ ကိုကြိုးပန်းနေကြောင်း
ပုဂလိက ဘဏ်တွေကိုအားပေးနေကြောင်း။ စက်မှု လုပ်ငန်းတွေ အသေးစားအလတ်စားအကြီးစားတွေ အားကောင်းလာအောင်လုပ်နေပါကြောင်း။
နိင်ငံပိုင် လုပ်ငန်းတွေကို လည်း လူတစုလက်ထဲ မရောက်အောင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း။
ပြည်တွင်းပြည်ပ တတ်သိပညာရှုင်တွေရဲ့အကြံညဏ်တွေအတိုင်း ပုဂလိက လုပ်ငန်းတွေ ဖွင့်ဖြိုးလာအောင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း။
လူလတ်တန်းစား များလာအောင်လုပ်နေကြောင်း။ အလုပ်ကိုင် များလာအောင်လုပ်နေကြောင်း။
နည်းပညာစီမံခန့် ခွဲ မှုတွေကို ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း။
သူနဲ့တကွ ဒုတိယသမတ နှစ်ဦး ၊ အစိုးရအဖွဲ ၀င်တွေဟာ တစိတ်တ၀မ်းထည်းရှိနေကြောင်း။
နေရာအနှံ က ဝေဖန် မှုတွေကို သိနေရတယ်။ ခေါင်းမာဂိုဏ်းနဲ့အပျော့ဂိုဏ်း မကွဲပါကြောင်း
လူတယောက်ခြင်းရဲ့အကျင့်စာရိုက်ကြောင်း အကောင်ထည်ဖေါ်မှုကွဲနေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း
နိင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့အားကောင်းဖို့ လုိုကြောင်း။ ကျနော်တို့ ဟာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
ခေတ်ဆက်အဆက် အမြစ်တွယ်နေတဲ့ လဘ်ာစားမှုကြီး ကို လည်း အသိပေးခြင်း၊ ကတိပေးခြင်း။ အရေးယူခြင်း တွေနဲ့နိမ်နင်းနေပါကြောင်း။ ခေတ်အဆက်ဆက် စူးဝင်နေတဲ့
အကြွေးမှီ တွေ ပြန်လျော၊ လစာတိုးမြင့်မှုတွေကို လဲ ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်း။
လူတန်းစားကွာဟ ချက် ရှိနေတယ်။ ပြည်သူဝင်ငွေနိမ်ကျ။ အပို ကုန်ကျစာရိတ် တွေလျောချဖို့ စေတနာ နဲ့လုပ်မယ်။
၀န်ထမ်း က လူဦးရေ ၃ဒသမ ၇ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း။ ၀န်ထမ်းတွေလစာ တိုးမြင်မယ်ဆိုလို
ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာ ခဲ့ကြောင်း။ လစာတိုးဖို့ ဆိုတာ ပါးစပ်က ပြောလွယ်သလောက်
လက်တွေမလွယ်ပါ။ မြေစမ်း ခရမ်းပျိုးဆောင်ရွက်နေရပါကြောင်း။
ဆင်းရဲ နွမ်းပါး မှုတွေကို လူသားဂုဏ်သိကာနဲ့အညီနေနိင်ဖို့အစိုးရ၊ အန်ဂျီအို တွေအကူညီနဲ့ လုပ်မယ်။ ၂၆ ရာခိုင်းရှိနေတဲ့ ဆင်းရဲ နွမ်းပါမှုကို ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ
လျောချပါမယ်။ ကုလသမဂရည်မှန်းချက်တွေအတိုင်း ဖြစ်လာအောင်လုပ်သွားပါမယ်။
ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ကို ပိုရအောင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း။ ဒီမိုကရေစီလူဘာင်တည်ထောင် တဲ့နေရာမှာ အသိပညာအခြေခံတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်လာအောင်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း။ နည်းပညာခေတ်မှာပညာခေတ် မှာ
အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှု၊ တယ်လီကွန်ယက်တွေကို ပိုပြီးလုပ်ပါမယ်။
ကျမာရေး ၄ ဆမြင့်တင်မယ်။ ပညာရေး ၂ ဆမြင့်ပါမယ်။
သဘာဝ အရင်းမြစ်တွေကို အခြေခံ တဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို ဦးစားပေး မှုထက် ထုတ်လုပ်မှုကို
နောက်ပြန်လှန်မကျဖို့ တွက် ၀ိုင်းကူပေးကြဖို့ပြောလိုပါတယ်။ ဒီမုိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာ အရပ်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်း အန်ဂျီ အို တွေ ရှင်သန်ဖို့ လုိုတယ်။ များလာတာကိုတွေ့ ရတယ်။ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဖြစ်တယ်။
အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏမှာရှိနေတယ်။ တောင်သူလယ်သမား၊ အလုပ်သမား သမဂတွေပေါ်လာအောင် လုပ်နေပါတယ်။
အမျိးသားလူအခွင့်အရေး အဖွဲ့ ကို ဖွဲ့ ပြီးလူအခွင့်အရေးကိုလည်းဖွဲ့ ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း။
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းမှာ ပြတ်ကျန်နေတဲ့ ကျနော်တို့ နိင်ငံ အမှီလိုက်နိင်ဖို့ အတွက် မြန်မာ့ အမျိးသားရေး Soft Power တွေများလာအောင်လုပ်သွားပါမယ်။
rule of law မြင့်မားလာအောင်၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားအောင်ုလုပ်မယ်။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အောင်လုပ်ပေးကြပါ။ တခြားအဖွဲ့ စည်းတွေကလည်း တည့်မတ်အောင်လုပ်ပေးကြပါ။
တိုင်းရင်းသားဆနကို အသက် နဲ့ ရင်းပြီး အရိုးကြေကြေ လုပ်ပါမယ်ဆိုတာကိုပြောကြားရင်း
Wheeeewwwww....... We had comealong way. Lets do it again boys. We are well aged already, but will do again for our new generation's goodness sake. This is the last time, reach out and takeaSTAR for Myanmar(Burma).
တတိယဆင့် - နိင်ငံတော်၊ အတိုက်ခံ၊ တိုင်းရင်းသားတွေပါတဲ့လွတ်တော်မှာ လက်မှတ်ထိုးပြီး
အဲဒီတတိယအတင့်မှာ..နိုင်ငံတော်..နှင့်.......တွေပါတဲ့.. ဆိုပြီးသုံးသွားပါတယ်။ အရင်ကအတိုင်း နိုင်ငံတော်ဆိုတာ.တပ်မတော်ကိုပြောတာလား..အစိုးရကိုပြောတာလား..မြန်မာနိုင်ငံကိုပြောတာလား. မြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုပြောရင်တော့..အတိုက်အခံတွေနဲ့..တိုင်းရင်းသားတွေက.နိုင်ငံခြားသားတွေပေါ့.။ အဲဒီလို နိုင်ငံတော် မဟုတ်တဲ့. နိုင်ငံတော်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ သူတွေကို ပြောသလိုပေါ့နော.